Imibhalo kaJennifer Golden on Martech Zone |
Imibhalo nge UJennifer Golden
U-Jennifer Golden ungumqondisi wezokumaketha kwezinkampani onomthwalo wemfanelo womhlaba wonke wesu lokumaketha nokusebenza ku- MRP. U-Jennifer uletha ulwazi olujulile ekuxhumeni idatha, imininingwane nezenzo ukuze enze okuvelayo okuhlala njalo komthengi. Ngaphambi kwe-MRP, ubesebenza njengomeluleki wezokumaketha nokuthengisa futhi ebambe izindima zobuholi bezentengiso e-Acxiom, eRigzone nakwezinye.
I-3-D Account-based Marketing (ABM): Ungakuletha Kanjani Ukumaketha Kwakho kwe-B2B Ekuphileni
NgoMsombuluko, Okthoba 25, 2021 NgoMsombuluko, Okthoba 25, 2021 UJennifer Golden
Njengoba siya ngokuya siqhuba umsebenzi wethu nezimpilo zethu zomuntu siqu ku-inthanethi, ubudlelwano be-B2B nokuxhumana kungene esimweni esisha esiyingxubevange. I-Account-Based Marketing (ABM) ingasiza ekuletheni imilayezo efanelekile phakathi kwezimo nezindawo ezishintshayo - kodwa kuphela uma izinkampani zifanisa izinto ezintsha zendawo yokusebenza ezinobukhulu obusha bobuchwepheshe obusebenzisa idatha yekhwalithi, imininingwane eqagelayo, kanye nokusebenzisana kwesikhathi sangempela. Ecatshangelwa ubhubhane lwe-COVID-19, izinkampani emhlabeni wonke sezicabange kabusha izinhlelo zokusebenza ezikude. Cishe ingxenye yezinkampani